Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Njem COVID-echekwabara na-atụ anya na ọ ga-eme ka ọganihu ụgbọ ala dịkwuo elu
Arịrịọ maka ezumike site na ụgbọ ala - ma na mba ofesi ma ọ bụ na UK - agbagoro ngwa ngwa n'ihi nchegbu Covid na mkpa ọ dị ka ịnọgide na-adọpụ uche ọha.
A na-atụ anya na ịga n'ihu na-achọ njem nchekwa Covid ga-eme ka mmụba nke ndị na-eme ezumike na-apụ n'ụgbọ ala nke ha na 2022, ka ha nwee ike ịnọpụ iche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị ọzọ opekempe, na-ekpughe nyocha ewepụtara na WTM London taa (Monday 1 Nọvemba) .
Mgbe a jụrụ ya: Ọrịa ọjọọ a emeela ka ị nwee ike ịga ụgbọ ala (ezumike ma ọ bụ na UK ma ọ bụ esenidụt ebe ị na-eji ụgbọ ala eme njem iji gbochie mmekọrịta gị na ndị ọzọ)? 50% nke ndị zaghachirinụ na-ekere òkè na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM London kwuru 'ee'.
Nnyocha nke ndị na-azụ ahịa UK 1,000 na-ekpughe ọtụtụ ndị mmadụ na Wales na West Midlands nwere ike ịhọrọ ụgbọ ala, yana 66% nke ndị zaghachiri na Wales na 61% na West Midlands, na-aza ee.
Ọgbọ ndị na-eto eto na-enwekarị mmasị ịkụ n'okporo ụzọ na ụgbọ ala, dị ka nchọpụta ahụ si kwuo, na 62% nke 18-21s, 58% nke 22-24s, 63% nke 25-34s na 59% nke 35-44s na-ekwu na Ọrịa ọrịa Covid emeela ka ha nwee ike iji ụgbọ ala mee ezumike ma gbochie mmekọrịta ha na ndị ọzọ. Naanị 39% nke ndị karịrị 55s kwuru na ha nwere ike ịtụle nhazi ụgbọ ala.
WTM London ga-ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị atọ na-abịa (Monday 1 - Wenezde 3 Nọvemba) na ExCeL - London.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: “Achọrọ maka ezumike site na ụgbọ ala - ma mba ofesi ma ọ bụ na UK - agbagoro ngwa ngwa n'ihi nchegbu Covid na mkpa ọ dị ka ịnọgide na-adọpụ uche ọha.
"Anyị na-atụ anya na ihe a chọrọ ga-amalite usoro njem ọhụrụ, yana ndị na-arụ ọrụ na ebe ndị na-aga n'ihu na-eweghachite ịnye nhọrọ ọhụrụ maka ndị na-anya ụgbọ ala ndị chọrọ ịbanye n'azụ wiil na 2022."